नायिका शिल्पा पोखरेलमाथि मुकुन्देको यस्तो आरोप : रित्तै आएर सित्तैमा खाने ? छवि ओझामाथि अन्याय भयो (भिडियो सहित) -
नायिका शिल्पा पोखरेलमाथि मुकुन्देको यस्तो आरोप : रित्तै आएर सित्तैमा खाने ? छवि ओझामाथि अन्याय भयो (भिडियो सहित)
काठमाडौँ । नायिका शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान निर्माता छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजुरी गरेपछि माहोल गर्माएको थियो ।
तर गत बिहिबार मात्र निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलको बिचमा महानगरीय प्रहरी परिसर,टेकुमा सहमति भएको थियो । नायिका शिल्पाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा पति छविराज ओझा विरुद्ध उजुरी गरेकी थिइन् । विगतमा छवि र शिल्पाले विवाह भएको लुकाउँदै आएका थिए ।
तर एकाएक डिर्भाेसको खबर आउँदा माहोल निकै तातेको थियो । छविराज ओझाकी शिल्पा पोखरेल चौथो श्रीमती हुन् । नायिका शिल्पा पोखरेलले निर्माता ओझाले निर्माण गरेको नेपाली फिल्म ‘लज्जा’बाट चलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन् । महानगरीय प्रहरी परिसरमा उनीहरुबीच आगामी दिनमा झगडा नगर्ने भन्दै लिखित सम्भौता भएको हो । तर, निर्माता छवि ओझाले डिर्भोस नदिने उल्लेख गरेका छन् । घरझगडा भएपछि नायिका शिल्पा पोखरेल अहिले दाई बनाएकी विकाश रौनियारको घरमा बस्दै आएकी छिन् ।
त्यस्तै, पछिल्लो पटक शिल्पा पोखरेलले छवी ओझालाई डिभोर्सको केस फाइल गरिसकेकी छिन । त्यो खबर सुनेर छबीले अझै पनि शिल्पासंगै जिउने भन्दै खुल्ला पत्र समेत लेखेका छन । छबी र शिल्पाको विषयले सामाजिक संजालमा निक्कै ठुलो क्रिया प्रतिक्रिया पनि चलेको छ ।
यसै क्रममा समसामयिक बिषयमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्दै सामाजिक संजालमा आलोचना र चर्चामा आइरहने मुकुन्द घिमिरे मुकुन्देले छबी ओझा र शिल्पा पोखरेलको बिषयमा कडा तरिकाले आफ्नो धारणा राखेका छन् । सामाजिक संजालमा मुकुन्देले लेखेको पोस्ट यतिबेला निकै चर्चामा छ । के लेखेका थिए मुकुन्दे ले ?
यो संगै एउटा युट्युब च्यानलमा मुकुन्देले शिल्प पोखरेल र छबी ओझाको बिषयमा बोलेका छन् । मुकुन्देले शिल्पा र छविको डिभोर्सको बिषयले सामाजिक संजाल तथा अनलाइन मिडियामा प्राथमिकता पाउनु अनावस्यक भएको बताएका छन् । यो संगै छविकै कारण शिल्पा अहिले यो स्थानमा पुगेको बताउदै उनले घरको सानो तिनो झगडालाई यसरि बढावा दिनुको कुनै औचित्य नभएको बताएका छन् । यो संगै शिल्पालाई रित्तै आएर सित्तैमा खाएको आरोप मुकुन्देको छ । थप भिडियोमा हेर्नुहोस:
प्रकाशित मिति ४ श्रावण २०७६, शनिबार ०३:४५